Qaado tijaabo aqooneed!
Maxaad ka taqaanaa faraqa u dhexeeya takhasuska waxbarashada guud iyo waxbrashada xirfadda?
Akhri sharraaxadaha! shaki la’aan waxaad baran kartaa wax cusub?
Hadda waxaad inyar ka taqaana faraqa u dhexeeya waxbarashada xirfadda iyo takhasusyada waxbrashada guud. Shaki la’aan waxaad dareemaysaa waxa ku saabsan waxa adiga kuu qalma?
Waxaa jira 5 barnaamij oo waxbarashada guud ah iyo 8 barnaamij oo waxbarasho xirfad ah oo aad kala dooran karto.